Wararka - Astaamaha iyo heerarka mashiinka maaskaro u qaabeysan
Astaamaha iyo heerarka mashiinka maaskaro u qaabeysan
Maaskarada kalluunka waa inuu la kulmaa EU en149: 2001 P3 standard. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in looga hortago siigada warshadaha iyo qiiqa birta ee aadka u wanaagsan inta lagu jiro hawlgalka alxanka. In ka badan 99% ka mid ahi waxay leeyihiin waxtarka sifaynta, taas oo aad ugu habboon deegaanka qoyan iyo kulul ama xidhashada ilaalin muddo dheer; waxay ku habboon tahay ilaalinta boodhka dhismaha, macdanta dhagaxa, dharka, shiidi, tuurista birta, dawooyinka, elektaroonigga, dawooyinka, waxsoosaarka iyo shiidi iyo warshadaha kale. Waxay sidoo kale leedahay saameyn wanaagsan oo aan boodh lahayn oo ku saabsan duufaanka ciidda.
Mashiinka maaskaro maaskarada nooca loo yaqaan Bangyin farsamo waa mashiin si otomaatig ah u laalabaya soo saarista jirka maaskaro. Waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda 'ultrasonic' si ay isugu xirto 3-5 lakab oo ah dhar aan tolmo lahayn oo PP ah, kaarboonka firfircoon iyo walxaha miiraha, oo gooya jirka maaskaro isku laaban. Marka loo eego alaabada ceeriin ee kala duwan ee la isticmaalay, waji-shareerka la soo saaray ayaa sidoo kale la kulmi kara heerar kala duwan sida ffp1, FFP2, N95, iwm. Suunka dhegta ayaa ah laastikada laastikada oo aan tolmo lahayn, taas oo ka dhigaysa dhagaha dhagaha mid raaxo leh oo aan cadaadis saarin. Lakabka miiraha miiraha ee maaskarada ayaa leh saameyn wanaagsan oo shaandhayn ah, oo si fiican ugu habboon qaabka wajiga Aasiya, waxaana lagu dabaqi karaa dhismaha, macdanta iyo warshadaha kale ee wasakhda sare.
Shaqooyinka iyo astaamaha mashiinka maaskaro maaskaro
1. Waxay ka baaraandegi kartaa jirka maaskaro isku laabma sida mashiinka maaskaro boodhka oo isku laaban nooca kalluunka, kaas oo laga shaqeyn karo hal mar.
2. PLC xakamaynta otomaatiga ah, tirinta otomaatiga ah.
3. Qalab fudud oo wax lagu hagaajiyo, oo si fudud shidaal looga helo.
4. Caaryadu waxay qaadataa soo saarista iyo habka beddelka, taas oo si dhakhso leh u beddeli karta caaryada isla markaana soo saari karta noocyo kala duwan oo waji ah.
5. Daawaha Aluminium waxaa loo isticmaalaa mashiinka oo dhan, kaas oo qurux badan oo adag oo aan miridh lahayn.
6. Qalab casri ah iyo qalab qaata.
7. Xasiloonida sare iyo heerka fashilka oo hooseeya.
maaskaro filter, ama si fudud shaandho maaskaro. Mabda 'u shaqeynteedu waa in la sameeyo hawo ay ku jiraan walxo waxyeello leh la sifeeyo laguna nadiifiyo walxaha miiraha ee maaskarada, ka dibna la neefsado.
Neefsashada nooca sahayda hawada waxaa loola jeedaa isha hawada nadiifka ah ee laga soocay maaddooyinka waxyeellada leh, taas oo loo diro wajiga qofka si loogu neefsado kateetarka iyada oo loo marayo ficilka korantada sida kombaresarada hawada, qalabka silsiladda gaaska la cadaadiyey, iwm.
Maaskarada nooca miiraha ayaa ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo shaqo maalmeedka. Qaababka xulashada iyo xaaladaha isticmaalka maaskarada noocan ah waxaa si faahfaahsan hoos loogu sharxay. Qaab dhismeedka maaskaro miiraha waa in loo qaybiyaa laba qaybood. Mid waa jirka ugu weyn ee maaskarada, kaas oo si fudud loogu fahmi karo inuu yahay qaab ka mid ah maaskaro; kan kale ayaa ah qaybta maaddada miiraha, oo ay ku jiraan suufka miiraha ee ka hortagga boodhka iyo sanduuqa shaandhada kiimikada ee fayraska kahortagga. Sidaa darteed, xulashada iyo isticmaalka maaskarada shaandhada, wax soo saarka qaar ee Guangjia waxay ku siinayaan ku habboonaanta soo socota, taas oo ah, waxaad isticmaali kartaa isla maaskaro jirka ah, iyo markii aad u baahan tahay inaad boorka ka caddeyso jawiga ka shaqeeya boodhka, waad gashan kartaa suufka shaandhada ee u dhigma, si aad u xiran karto maaskaro boodh ah; markii aad u baahan tahay inaad ka hortagga gaaska ku sameyso jawi sun ah, ku beddel suufka miiraha, iyo qalabka ay ku jirto Sanduuqa miiraha kiimikada ee u dhigma, sidaa darteed wuxuu noqdaa maaskaro gaas, ama hadba baahidaada shaqo, si laguu siiyo isku-darka badan
Hordhac kooban oo ah waxyaabaha shaandhada loogu talagalay maaskaro
Qalabka miiraha ee waji-ka-ilaalinta ayaa badanaa loo qaybiyaa laba qaybood, kuwaas oo kala ah boodh-ka-hortagga iyo sunta sunta. Hawlahoodu waa inay xayeysiiyaan aerosolka waxyeellada leh, oo ay ku jiraan boodhka, qiiqa, dhibcaha ceeryaanta, gaasaska sunta ah iyo uumiga sunta leh, iyada oo loo marayo qalabka miiraha, si looga joojiyo neefta.
Adeegsiga maaskarada guud, maaskaradu waa inay ahaadaan cabir habboon, xirashada jidka waa inuu ahaadaa mid sax ah, maaskaradu waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah. Maaskarada lagu iibiyo suuqa guud ahaan waxaa loo qaybiyaa qaab afar gees leh iyo koob. Maaskarada afar-geesoodka ahi waa inay lahaadaan ugu yaraan saddex lakab oo qaab-dhismeed xaashi ah si ay u yeelato saameyn difaac leh. Isticmaaluhu waa inuu ku riixaa siligga maaskaro saaran buundada sanka, ka dibna ku faafiyaa maaskaro dhan wejiga buundada sanka, si uu uga ciyaaro door wax ku ool ah. Carruurtu way xiran karaan maaskarado qalliin oo qaabaysan, maxaa yeelay ma laha qaab go'an, haddii si fiican loo xidho, waxay ku dhowaan kartaa wejiga ilmaha. Maaskaro u eg koobka waa in la hubiyaa in cufnaanta maaskaro ay ku filan tahay ka dib marka wejiga lagu dhajiyo, si neefta hawadu aysan u soo daadan si ay waxtar u yeelato. Markaad xiraneyso maaskaro u eg koobka, ku dabool maaskaro labada gacmood iskuna day inaad afuufto. Hubi inay jirto daadasho hawo ah cirifka maaskarada. Haddii maaskaradu aysan dhaganayn, waa inaad hagaajisaa booska kahor intaadan xirin.
Goorma ayaan u baahanahay inaan beddelo maaskaro
1. Maaskarada waa wasakhaysay, sida dheecaanka dhiigga ama dhibcaha
2. Isticmaaluhu wuxuu dareemay in iska caabbinta neefsigu ay kordheen. Suufka shaandhada cadeeya ee boodhka ah: marka maaskaro sifiican ula jaan qaado wejiga isticmaalaha, marka adeegsaduhu dareemo caabbinta neefsashada weyn, waxay ka dhigan tahay in suufka miiraha ay ka buuxaan waxyaalo boodh ah waana in la beddelaa
3. Maaskarada ayaa dhaawacan
4. Shuruudda ah in maaskarada iyo albaabka isticmaalaha ay si fiican u xiran yihiin, marka isticmaalaha urta urta sunta, maaskarada cusub waa in aan si ku meel gaar ah loo xirin. Marka laga fiiriyo qaabdhismeedka jir ahaaneed ee bini'aadamka, wareegga dhiigga ee xabka sanka waa mid aad u xoog badan.
mashiinka sameynta maaskaro qalliin, mashiinka sameynta maaskaro wajiga qalliinka, aan tolmo wanaagsan lahayn mashiinka qaadashada maaskaro, Mashiinka haysa tuubada, Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn, mashiinka sameeyaha maaskaro,